ညီလင်းသစ်: မီယာဇာကီနှင့် ကျနော်တို့မိသားစု
Posted by ညီလင်းသစ် au 24.6.11
sprited away က တကယ့်လူ့လောကကို လှောင်ပြောင် သရုပ်ဖော်နေတာလို့မြင်မိတယ်။ သူတို့မိသားစု ကားပျက်တာက စပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေ အစားအသောက်တွေငမ်းရာကနေ ဝက်ကြီးတွေဖြစ်သွားကြတာမို့ ကလေးမလေး အိမ်အပြန်ခက်သွားခဲ့တာပါ။ ပိုက်ဆံငွေကြေးနောက်ကို လိုက်နေတဲ့လူတွေ ပြိတ်တာလိုအကောင်တွေကိုတောင် မရွံ့မရှာချဉ်းကပ်ကြတဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ်. စုန်းမကြီးအခန်းထဲက ခေါင်းသုံးလုံးကလည်း အသက်ဝင်ပီပြင်လှသလို ကလေးကြီးကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်
နိုင်းနိုင်းစနေ ညွန်းလို့Sprited Away,Princess Mononoke, Grave of FireFlies ကြည့်ပြီးပါပြီ။ အရမ်းကောင်းတယ်။ အကိုညွှန်းလို့Castle in the sky ကို ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ကားကောင်းလေးတွေ ကြည့်ရရင် ညွှန်းပါဦးနော် :)။
သူငယ်ချင်းက ခဏခဏကြည့်ဘို့ ပြောတယ်။ မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ ကြည့်အုန်းမှဘဲဒါ ဆို။ ကျေးဇူးနော်။
အညွှန်းနဲ့တင် ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းကောင်းနေပြီ။ ကြည့်ဖြစ်ဖို့ကတော့ အသေအချာဘဲ။
Ponyo ကိုကြည့်မယ်ကြည့်မယ်နဲ့ ခုထိမကြည့်ဖြစ်သေးဘူး၊ အလုပ်ထဲမှာ အဲဒီကားထဲက သီချင်းနဲ့ ဖုန်း ring tone လုပ်ထားတဲ့သူရှိတယ်၊ နားထောင်လို့ သိပ်ကောင်းတာ။ 宮崎 駿 ဆိုတဲ့ ခန်းဂျီးနဲ့ပဲ ပိုရင်းနှီးတယ်၊ Miyazaki ဆိုတော့ ဘယ်သူများလဲလို့။
Totoro ကို စပြီးကြည့်ဖူးကတည်းက အဲ့ဒီ cartoon theme ကို သတိထားမိတာ။ သူ့ကာတွန်းကောင်လေးတွေ လက်ဆောင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ခဏခဏမြင်ရတယ်။ အသေးစိတ်လေးတွေကအစ စေ့စပ်သေချာတဲ့ ကာတွန်းကောင်းတွေ ပေးကြည့်တာ ကလေးတွေအတွက် စိတ်ကူးဥာဏ်ကောင်းစေတယ် တဲ့.. =)
ဒါပေမဲ့ ကိုညီလင်းသစ် အညွှန်းကောင်းတာနဲ့ တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်။ ရှာကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီရှင်..
Thank you for sharing and recommending this, Ko Nyi Linn Thit! Will definitely look for those cartoons.
ဟား.....အတော်ပဲ...picktorrent ကနေဒေါင်းယူဖို့ ကား
အမည်တွေရဘီ...။မီယာဇာကီ ရဲ့ကားတွေကို ဘလော့တစ်ခုမှာညွှန်းလို့ Princess Mononoke တစ်ကား
ခုတော့ မီယာဇာကီကြောင့် ကြည့်တတ်သွားတာ...။
Sprited away တော့ ရို့စ် ကြည့်ပြီးတာ နည်းနည်း ကြာပြီ။ ကျန်တာတွေ မကြည့်ရသေးဘူး။ ကြည့်လိုက်ဦးမှ။ ရို့စ်လည်း ကာတွန်းကားဆို ကြိုက်တယ်။ ကလေးတွေနဲ့ အတူ ကြည့်တား))
ကျွန်တော်ရယ် သားရယ်ကလဲ ကာတွန်းကားဘစ်ဖန်တွေပါပဲ..
ကိုညီလင်းသစ်ညွှန်းကောင်းလို့ ကြည့်ရမယ့်ကားလေးတွေထပ်တိုးလာပြီ...။ Princess Mononoke တစ်ကားတော့ကြည့်ဖူးတယ်.. ဒါရိုက်တာဘယ်သူလိုဆိုတာတော့ ထဲထဲဝင်င်မလေ့လာဖြစ်ဘူး...။ Ponyo ကားလေးကြည့်ချင်လှပြီ...။
ကျမလဲ မကြည့်ဖူးသေးဘူး။ ကိုညီလင်း အညွှန်းကောင်းလို့ ကြည့်ချင်သွားပြီ။ ကိုညီလင်းက အသေးစိတ်ကို သတိထားကြည့်ထားပြီး ပြန်ရေးပြတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ အဲလိုလေးရေးပြမှ ကျမတို့လဲ သတိထားကြည့်မိမှာ။
ဒါနဲ့ ကျမကတော့ မီးပူတိုက် အလွန်ပျင်းတာ။ ကိုညီလင်းက မီးပူတိုက်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ အံ့သြမိသေး :))
ကြည့်ပါ၊ ကြည့်ပါ...၊ ကြိုက်ဖို့ များပါတယ်..၊း)
အသေးစိတ်ကို မှတ်မိနေတာပဲ၊ ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီလို လူ့လောကကို သရော်တဲ့ ရှုထောင့်ဆိုတာကို ကျနော် လည်း သဘောတူတယ်၊
ကျနော်တော့ Castle in the sky ကို အတော်လေး ကြိုက်ခဲ့တယ်ဗျ၊ လာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး ပါဗျာ...၊
ဒါဆိုရင် ဒီတခါတော့ အဲဒီ သူငယ်ချင်းစကားကို နားထောင်လိုက်ဖို့ သင့်ပါပြီ....၊း)
အဆင်ပြေရင် ကြည့်သာကြည့်ဗျို့၊ ရသအစုံ ရမှာ သေချာတယ်...၊း)
ဟာ.. ဒါဆိုရင်တော့ Ponyo ကို အမြန်သာ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျာ၊ ထုံးစံအတိုင်း သူပဲ ကြံကြံဖန်ဖန် စဉ်းစားတတ်မယ့် အတွေးမျိုးတွေနဲ့ဗျ၊ Music နဲ့ Scenery ကတော့ အထူးပြောစရာကို မလို တော့ပါဘူး...၊ ခန်းဂျီးတော့ နကန်းတလုံးမှ နားမလည် ဘူးဗျာ..၊း(
ဒီကွန်မန့်ကို သားသာ မြင်ရင်တော့ မရွှန်းမီကို အတော် ကျေးဇူးတင်မှာ သေချာတယ်၊ ပြီးရင်တော့ ကျနော့်ကို အရေးဆိုလိမ့်မယ်....ဟားဟား၊းD
ကျနော် ညွှန်းတာက နည်းနည်းရယ်ပါ၊ ကာတွန်းကား မကြိုက်သူတွေတောင် ကြည့်ပျော်တယ် လို့ မှတ်ချက် ပေးကြပါတယ်...၊ ဆိုတော့ ကြည့်သာ ကြည့်,ကြည့်ပါ၊
Sharing is caring လို့ ဆိုကြပြန်တယ် မဟုတ်လား၊ Just go for it လို့ပဲ ဆိုပါရစေတော့...၊း)
မီယာဇာကီကြောင့် ဂျပန်ကာတွန်းတွေကို ကြည့်လို့ ရသွားတာ ဆိုရင်တော့ ကျနော်နဲ့ တူနေပြီဗျို့...၊ ကျနော်တို့တော့ အဖိုးကြီးရဲ့ မှော်မှာ မိနေကြပြီ ထင်တယ်..၊း)
Good တယ် ထင်တဲ့အတွက် do သာ do ပါ အမရေ..၊း)
ကာတွန်းကား ကြိုက်တာ သတိထားမိတယ်၊ ရိုစ့် ဘလော့ဂ်မှာလည်း ကာတွန်းကား အညွှန်းလေးတွေ ဖတ်ဖူးတယ်လေ....၊း)
ကို N/A တို့ သားအဖလည်း ကျနော်တို့ သားအဖလိုပဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်ဗျို့....၊း)
ဒါဆိုလည်း ဝမ်းသာရပါသဗျာ..၊ Ponyo ကတော့ အတော်လေးကို ကောင်းတယ်ဗျ၊ 'သြော်.. ဒီလူ့ ဦးနှောက်နှယ်...' လို့ပဲ တချိန်လုံး အံ့သြနေခဲ့ရတယ်..၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်၊ ကာတွန်းကားလေးတွေက ရိုးရှင်းစွာနဲ့ message တွေကို ပေးတတ်ကြလို့ ကျနော် လည်း ကြိုက်တယ်ဗျ...၊
စာမေးပွဲလည်း ပြီးပြီဆိုတော့ အချိန်ရရင် ကြည့်,ကြည့် ပါ၊ သူ့ကားတွေကနေ တစုံတခုတော့ ရမှာ သေချာပါတယ်၊ မီးပူနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ကျနော်က မမေနဲ့ ပြောင်းပြန်လို့ ဆိုရမှာပဲ၊ ကျနော်က မီးပူတိုက်ရ တာ ပျော်တယ်ဗျ...။း))
I agree with you, he's Asian Walt Disney".I like "Ponyo"and "Howl's moving castle" best,anyway all of his movies are really really nice.
မီယာဇာကီ ရဲ့ ကာတွန်းတွေ ကြိုက်တာသိရတော့ ကျွန်မတို့နဲ့ အကြိုက်ချင်းတူတာပေါ့။
ကျွန်မက သူ့လက်ရာတွေကို အသက်၂၄နှစ်ကမှ (မနှစ်ကပဲဆိုပါတော့း) ) စကြည့်ဖူးတာ။
ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာတော့ ပို့ညို သီချင်းအကြောင်းရေးဘူးတယ်။
ဒါရိုက်တာ မီယာဇာ့ကီ ရဲ့ ကာတွန်းတွေကို မြန်မာလိုပြန်ချင်တယ်။
ကမ္ဘာကျော်အနုပညာလက်ရာတွေကို ခံစားကျွမ်းဝင်ပြီး ရသကော အနာဂတ် အိပ်မက်တွေကော မွေးဖွားပေးစေနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
အော်....ဒါရိုက်တာနံမည်ကဒါကိုး...Spirit Away နဲ့ Ponyo ကိုကြည့်ဖူးတယ်။ Spirit Away ဆိုတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံပေမယ့် အချဉ်မကြိုက်တဲ့သူအတွက် သံပရာရည်ကို မစွဲမိခဲ့ဘူး..။အခုအကို့စာကို ဖတ်လိုက်မှ နုနယ်ပေမယ့် စိတ်ဓါတ်မာကျော ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီး ဇတ်ကောင်ကိုကျွန်တော် မကြိုက်လို့မှန်းသဘောပေါက်မိတယ်။ ကျွန်တော်က Masculism Strong ဖြစ်ပါတယ်။ အကိုရော Michael Corleone ထက် Chihiro Ogino ကိုပိုကြိုက်လား?
တစ်ခါလောက်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်အုံးမယ် ။ ကျေးဇူး အစ်ကို ။
I like those two films, too. They give two different points of view and feelings.
ဒါဆို မီယာဇာကီကို စ,သိတာ ကျနော့်ထက် စောတာ ပေါ့၊း) သူ့လက်ရာတွေကို ဘာသာပြန်နိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့၊ မြန်မာ ပရိတ်သတ် ကြိုက်မှာ သေချာ ပါတယ်၊ သားလေးလည်း ကြိုက်မယ် ထင်တယ်နော်..၊
Masculism strong ဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ အီတာလျံ ကာရိုက်တာတွေ ကြိုက်မှာ သေချာပြီ၊း) သူတို့က အဲဒီအတွက် နာမည်ကြီးတယ် မဟုတ်လား၊ ကျနော်က မေးထားတဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးကို ကြိုက်ပါတယ်၊ မီယာဇာကီက အချို့ မိန်းကလေး ဇတ်ကောင်တွေကို အလေးပေးထားတာ မှန်ပေမယ့် ကျနော်က သူ့ရဲ့ ဇတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ Scenic beauty တွေ၊ background music တွေကို အဓိက ပိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..၊
အဆင်ပြေရင်မယ်ဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့ညီရာ...။း)
ဟုတ်ကဲ့အကို..ကျွန်တော်လဲ Spirited Away ကြည့်ပြီးတော်တော်ကြာအထိ တခြား Animation ဆိုပေါ့နေတာ..ကျွန်တော်ခု Howl's Moving Castle ကိုကြည့်မလို့..ကျေးဇူးပါအကို။
Spirted Away ကိုလွန်ခဲ့သော လေးနှစ်လောက်က ထင်တယ် စကြည့်ဘူးတာ. ခုထက်ထိ သတိရရင် ရသလို ကြည့်နေတယ်(ဟီး ဆယ်ခေါက်ကျော်ပြီနဲ့ တူတယ်) အဲ့ဒီ ကားကို .Castle in the sky ကတော့ လေးခေါက်လောက်ဘဲရှိသေးတယ်ကြည့်တာ. အစ်ကိုရေးတဲ့ စာကိုဖတ်မိတော့ ဒီနေ့ထပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် ယူဘာဘာကြီးကို သဘောကျလွန်းလို့.
သေသေချာချာ မကြည့်ဖြစ်သေးဘူး အကိုပြောလို့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်အုံးမယ်...:) ....
ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း....
မီရာဇာကီရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို မန်ဂါ လို့မခေါ်ပါဘူး
မန်ဂါဆိုတာ Sailor Moon လိုမျက်လုံးကမျက်နှာတဝက်လောက်ပြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေပါတဲ့ကာတွန်းကားတွေပါ
မီရာဇာကီ က live action မဟုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာ ခံစားမှုပါအောင် 3Dနဲ့ပြစရာမလိုဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက် အခုထိ 2D နဲ့ဘဲ သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်စဲပါ
( Take that Avatar/James Cameron! )
နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ studio Ghibli ကထွက်တဲ့ကားတွေကိုသူ produce ပဲလုပ်တာများပါတယ်
ဟိုးတုန်းက မြန်မာပြည် TV မှာ My Neighbour Totoro ဆိုတဲ့ကာတွန်းလေးလာဖူးပါတယ်
အဲဒီကားထဲက Totoro ကသူ့ရဲ့နာမယ်အကြီးဆုံးဇတ်ကောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
သူ့ရဲ့ studio ghibli mascot ကလဲ totoro ပါဘဲ
ကိုညီလင်းသစ်ရေ... ကိကိနဲ့ တိုတိုရိုက လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ အပိုင်းလေးတွေ ခွဲပြီး ပြဖူးတယ်။ အဲဒီ့ကတည်းက မီရာဇာကီရဲ့ ကာတွန်းကားတွေကို သိပ်သဘောကျခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းမှာ 'Castle in the Sky'၊ 'Princess Mononoke'၊ 'Spirited Away' တို့ကို တောက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ Spirited Away နဲ့ အော်စကာဆုရပေမယ့် ဆုတက်မယူတဲ့ သူ့အကြောင်း ဖတ်မိအပြီးမှာ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားသွားတာ။ နောက်ပြီး သူ့လက်ရာတွေဖြစ်တဲ့ စုံထောက်လုပင် (Lupin) ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုလည်း အတော်ကြိုက်ခဲ့သေးတာ။း)
သြော်... ကိုညီလင်းသစ်ရေ... လင့်ခ်ယူမယ်ယူမယ်နဲ့ မယူဖြစ်သေးတာ ခုတစ်ခေါက်တော့ တကယ်ပဲ ယူဖြစ်သွားပြီ။
ဂျပန်မှာ ဟိုခေတ် (လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၃၀ ကျော်လောက်တုန်း )ကတော့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်/ကာတွန်းကား ကို မမ်ဂါ့ လို့ပဲ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ ကာတွန်းကားဆိုရင် “အာနီမဲ” (Animation အာနီမေးရှင်း ရဲ့ အတိုကောက် ) လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ အလွယ်သဘောနဲ့ပြောရင်
မမ်ဂါ့= ကာတွန်းကောင် အရုပ် မလှုပ်သော (စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးသားထားသော) ကာတွန်း။
အာနီမဲ = လှုပ်သော (ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယို) ကာတွန်း။
မီယာဇာကီ ကို ဘယ်လိုလူလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ “မမ်ဂါ့ ခါ့”(မမ်ဂါ့ ပညာရှင်) လို့ပြောလည်းရပါတယ်။
သူဒါရိုက်တာလုပ်တာ နဂိုတည်းက အထွက်ကျဲတော့ အသက်အရ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတာတော့ နည်းသွားပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် မှာ “ပို့ညို” ပြီးတော့ ၊ ၂၀၁၀ခုနှစ် မှာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ “ပမ်းဒါ့နဲ့ တို့ တာမာ့ဂို ဟိမဲ” ပါ။ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%B3%E7%A8%AE%E3%81%A8%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%B4%E5%A7%AB
ကောင်းတယ်ဗျာ၊ အဲဒီ Howl's moving castle က ကျနော့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးထဲက တစ်ခုပဲဗျ...၊း)
Wow... အဲဒီလောက်တောင် ကြည့်တာလား၊း) ဒါဆိုရင်တော့ စကားပြောတွေ၊ တီးလုံးတွေကအစ အလွတ်ရနေလောက်ပြီ...နော၊း)
ကောင်းသော နေ့ရက်လေးတွေမှာ အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ...၊ ;D
မှန်ပါတယ်၊ ကျနော်လည်း သူ့ကားတွေကို ဒီဖက်ခေတ်မှာ မန်ဂါလို့ ခေါ်ကြတာ မကြားဖူးဘူးဗျ၊ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကြောင့် 2D မှာပဲ ဆက်နေနေ၊ 3D ပဲပြောင်းပြောင်း လူတွေက လက်ခံနေ ကြမှာပါ၊ မြန်မာပြည်အထိ ရောက်လာခဲ့တာတော့ ကျနော်လုံးဝ မသိလိုက်ဘူးဗျ၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါနော်၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်ကဆို မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်ရှိနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီဇတ်လမ်းတွေ ပြသွားတာ လုံးဝမသိလိုက်ဘူးဗျ၊ ကြည့်ရတာတော့ မဇွန်မိုးစက်က မီယာဇာကီရဲ့ ပရိတ်သတ်အစစ် ဖြစ်ပုံရ တယ်ဗျို့၊ အများကြီးသိတာပဲ...၊လင့်ခ်ယူသွားလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျနော်လည်း လာခဲ့ပါဦးမယ်..၊
မမ်ဂါ့နဲ့ အာနီမဲကို တခါတည်း သဘောပေါက်သွား အောင် ရှင်းပြသွားတာ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ မီယာဇာကီက မမ်ဂါ့ခါ့ တဲ့လား၊ မ,ကောင်းမွန် ကွန်မန့်မှာ ရေးသွားတဲ့ မြန်မာဖိုနက်တစ် ဂျပန်စာလုံးတွေကို ရွတ်ကြည့်နေမိ တယ်၊ တခါတုန်းက ဂျပန်စကား သင်ချင်ခဲ့တဲ့စိတ်က အညွန့်တလူလူ ပြန်ထွက်လာတယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ..။း)
ရှာကြည့်ဦးမယ်အကို။ ခေတ်မမီဘူးပဲပြောပြော မကြည့်ဖူးသေးဘူး။း)
ကြုံရင် ကြည့်,ကြည့်ပါ ညီမရေ၊ ကြိုက်ဖို့ များပါတယ်၊း)